Articles tagged 'gershem pasi'
Zimra bosses hearings begin 7 March 2017 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) says disciplinary hearings for suspended Commissioner General Gershem Pasi and five other executives have begun. Zimra director for legal and corporate services Florence Jambwa, last week said Pasi's cross-examination was being handled externally...
Zimra to realise $40m from tax amnesty 27 January 2016 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) Commissioner-General Gershem Pasi says the taxman assessed about $40 million tax claims during its tax amnesty last year. Speaking on the side-lines of the International Customs Day commemorations in the capital yesterday, Pasi said the authority...
Govt moots taxing churches 26 June 2015 HARARE - Zimbabwe's deepening economic crisis is leading government to consider taxing cash-rich charismatic churches. A set of laws exempts traditional churches and other recognised religious and nonprofit organisations from paying tax in Zimbabwe. But the cash-strapped government is now c...
Delays, corruption rife at Zim borders 6 April 2015 HARARE - Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) commissioner-general Gershem Pasi has urged government to shelve the idea of establishing a Ports Authority project because government has no money to embark on the ambitious venture. Transport Minister Obert Mpofu is pushing for the implementation o...
Zimra plans blitz on tax defaulters 2 March 2015 HARARE - The Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) has threatened to “descend” heavily on all tax defaulters who ignore the granted amnesty to regularise their outstanding tax bills. Gershem Pasi, the Zimra commissioner-general said the national tax collector was “very disappointed” by the amount...
Zimra issues amnesty on all taxes 10 November 2014 HARARE - A tax amnesty provision has been made by the Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) on penalties, interest and prosecution for the non-payment and irregularities of all taxes administered by the tax collecting body. In a statement issued yesterday, Zimra said the amnesty was in respect to...
Zimra boss sued over $1,5m debt 13 July 2014 HARARE - Gershem Pasi, the Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) commissioner general, is failing to pay back $1,5 million he borrowed from Interfin Banking Corporation Limited (Interfin) to fund operations for his diamond cutting and polishing company. The bank has since filed a High Court appli...
Zimra boss tackles MDC MP 5 March 2014 HARARE - Gershem Pasi, the Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) commissioner-general, has petitioned Parliament to charge Mbizo legislator Settlement Chikwinya — under its standing orders — for alleging he was earning $310 000 a month. The development also comes as the tax agency and its boss ha...
Zimra boss takes aim at Parliament 4 March 2014 HARARE - Zimbabwe Revenue Authority (Zimra) commissioner-general Gershem Pasi is mulling a constitutional challenge to stop what he describes as abuse of parliamentary privilege in tackling national issues, including salary-gate. This also comes as the tax collector and his organisation have p...